Boqollaal qof oo ka qaxaya musiibo ka dhacday Uganda - Waadinews | Somali News and Entertainments
Boqollaal qof oo ka qaxaya musiibo ka dhacday Uganda
Saraakiisha ayaa sheegaya in ugu yaraan 6 ruux ay dhinteen 17 kalena ay ku dhaawacmeen dhul go’ aroornimadii hore ee Arbacada ka dhacay qeybaha bari ee dalka Uganda, gaar ahaan degmada Bududa. Waxaa laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay sii kororto maadaama wali ay jiraan dad la la’yahay oo qoysaskoodu ay raadinayaan. Musiibooyinka dhul go’a ayaa ku badan aaggaas, oo u dhow buurta caanka ah ee lagu magacaabo Elgon, taasoo u dhow xadka kala qeybiya Uganda iyo Kenya.
Dad ka badan 300 oo ruux ayaa ku dhintay musiibo noocaas ah oo isla deegaankaas ka dhacday sanadkii 2010-kii. Dhul go’ii ugu dambeeyay ayaa ka dhacay xaafado lagu kala magacaabo Butebulo iyo Bunamwamba ka dib markii ay da’een roobab mahiigaan ah oo socday 3 maalmood. Mas’uuliyiinta maxalliga ah ayaa qiyaasay in boqollaal ruux ay ka barakaceen guryahooda, ayna hoy ka dhiganayaan kaniisadaha iyo masaajidyada, ama guryaha kale ee qaraabadooda.
Xaafad kale ayuu dhulku ka dillaacay, kooxaha gurmadka deg degga ah ayaana hadda qiimeynaya waxyeellada ka dhalan karta. Wilson Watila oo ah guddoomiyaha degmada ayaa sheegay in musiibadu ay sii socon karto haddii ay roobab kale da’aan, isagoo intaasna ku daray in xaafado badan ay khatar ugu jiraan inuu dhulku la go’o. Dawladda ayaa laga soo xigtay in deegaannadaas ay ku nool yihiin dad kor u dhaafaya 100,000(boqol kun) oo ruux. Dhul go’ sanadkii lasoo dhaafay dhacay ayaa dilay ugu yaraan 40 ruux. BBC
Madaxweynaha Uganda Oo Mar Kale Ku Taagsaday Soomaaliya
Waddan Afrikaan Ah Oo Doonaya In Uu Madaxweynihii Hore Ee Suudaan Ka Badbaadiyo Maxkamadda Dambiyada Caalamka
Madaxweynaha Uganda: “Askariga Dhaqanka Xun Waxaan U Masaafurin Doonnaa Soomaaliya”
Top army post for Ugandan president Museveni’s son
Madaxweyne Wiilkiisa ugu magacaabay taliyaha ugu sarreeyo militariga